दोहोरी च्याम्पियन सेटिङ र नाटक हो, के कल्पना दाहाल नवगायिका हुन र ? आयो यस्तो आरोप (भिडियो) – Classic Khabar
दोहोरी च्याम्पियन सेटिङ र नाटक हो, के कल्पना दाहाल नवगायिका हुन र ? आयो यस्तो आरोप (भिडियो)
March 23, 2021 144
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको ‘दोहोरी च्याम्पियन’ आलोचित बनेको छ । ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को पहिलो एपिसियोड नै आलोचना नै आलोचनाले भरिएको छ । हजारौँले दिएको डिजिटल अडिसनबाट छनोट भएका ३५ टिमको फिजिकल अडिसन शनिवार प्रसारण गरिएको थियो । ‘दोहोरी च्याम्पियन’ हरेक शनिवार साँझ ८ः५० मा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ । पहिलो भाग प्रसारण भएसँगै यो सो आलोचित बनेको हो । अहिलेसम्म यो सोलाइ तीन लाख बाह्र हजार बढी दर्शकहरूले हेरिसकेका छन् भने, आठ हजार सात सय बढी दर्शकलेसमेत प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जसमा अधिकांश प्रतिक्रिया भने नकारात्मक छन् ।आलोचनाको मुख्य कारण भने यस शोका जजहरू नै हुन् । लोकदोहोरी क्षेत्रमा स्थापित कतिपय कलाकारहरूले समेत ‘दोहोरी च्याम्पियन’ मा जजहरूको निर्णय गर्ने शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालबाटै आलोचना र व्यङ्ग्य गरेका छन् । कतिपय दर्शकले जजहरूमा अनुशासन नभएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् । भने कतिपयले जजहरूमा बढी घमण्ड भएको प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । त्यस्तै कतिपय दर्शकले यसका निर्णायकहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।
‘दोहोरी च्याम्पियन’को निर्णायकका रूपमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गीतकार रमेश बि.जी लोकदोहोरी गायक प्रजापति पराजुली, लोकदोहोरी गायिका सीता थापा र गायक तथा गीतकार चन्द्र शर्मा रहेका छन् । यस्तै कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा लोकदोहोरी गायक बद्री पङ्गेनी र लोकदोहोरी गायिका प्रीति आले रहेका छन् । यो बिषयलाई लिएर पुन्य गौतम र सागर थापाले आ आफ्नो बिचार रखेका छन । हेरौ उनिहरुले के भनेका छन भिडियोमा
Prevमृत्युको मुखबाट बचेँकी नायिका विपना थापाले ऋषी धमलालाई भनिन्, ‘मलाई कु टौं ला झै गरी नसोध्नुस्, भारतले सिमा अतिक्रमण गरेको विषयमा मैले मुख्य ठाउँमै कुरा उठाएकी छु’ (भिडियो हेर्नुस्)
Nextबिहानै बसले ठक्क र दिदा आफ्नो सानो दुधे बालकलाई छोडेर बिदा भएकी कमला
आफ्नै श्रीमानबाटै बेचिइन् पाँच सन्तानकी आमा, ६ वर्षपछि बल्ल …..
नेपाल र भारतबीचको फूटवल हेर्न यसरी लिन सकिन्छ टिकट
हाम्रो सम्मानित अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी ओली, अब मिलेर एमालेलाई बलियो बनाउँछौं : भीम रावल (954)
कन्चनको अस्पतालमा मृ,त्यु, बल्ल मुख खोलिन भा,वुक हुँदै अनिशाले वास्तविकता (भिडियो सहित) (636)